अष्ट्रेलियाले करियर विकास र राम्रो जीवनस्तर दिलाउँछ : सतीश लामिछाने,विद्यार्थी - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाले करियर विकास र राम्रो जीवनस्तर दिलाउँछ : सतीश लामिछाने,विद्यार्थी
Posted by Himalayan Kangaroo | २२ पुष २०७३, शुक्रबार ०३:४० |
मेलबर्न । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची घर भएका १९ वर्षीय, सतीश लामिछाने हाल मेलबर्नको ट्रोब विश्वविद्यालयमा आई.टी विषयमा अध्ययनरत छन् । अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया आएका उनी आफूले सोचेको र भोगेको अष्ट्रेलियामा निकै अन्तर भएको बताउँछन् । अष्ट्रेलियाले आफूलाई आत्मनिर्भर बन्न सिकाएको बताउने उनले यहां राम्रो करियर र जीवनस्तरको अवसर भएको बताए । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी यो स्टुडेन्ट टल्कमा ।
मेरो घर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा हो । तर पढ़ाई भने काठमाण्डौमा गरेको हूँ ।
अहिले म मेलबर्नको ट्रोब विश्वविद्यालयमा पढ्दै छु ।
म सूचना प्रविधि (आई.टी) विषय पढ्दैछु ।
म चिकित्साशास्त्र पढ़न चाहन्थें तर धेरै महंगो शुल्क हुनेभएकोले आई. टी विषय रोजेर अष्ट्रेलिया आएको हूँ । मलाई विषय चयनमा परिवारबाट कहिल्यै दबाब आएन ।
मेरो लागि विद्यार्थी जीवन पाठशाला धाउने मात्र नभई जिन्दगीलाई बुझ्ने अवसर हो । विद्यार्थी जीवनले नै मलाई आत्मविश्वासका साथ जिउन सिकाएको छ ।
मलाई विद्यार्थी जीवन कहिल्यै नराम्रो लागेन ।
लभ गर्नु भनेको आफ्नो भावना व्यक्त गर्नु हो । जो कोहीसँग हुनै पनि बेला प्रेम भावना हुन सक्छ । त्यो प्रकट गर्नु उसको अधिकार हो । त्यसैले यसलाई म गलत मान्दिनँ ।
लेक्चर त बोरिङ नि ! लभ लेटर नै मिठो लाग्छ । सायद यो मेरो किशोरावस्थाको लक्षण होला ।
कक्षामा कतिखेर निन्द्रा लाग्छ ?
एकोहोरो बोरिङ लेक्चर भयो भने निन्द्रा लाग्छ ।
त्यस्तो सपना नै देख्ने गरी त निदाएको छैन है ।
म आत्मनिर्भर हुन सिकें । मम्मीले पकाएर दिएको खाने, बाबाले कमाएर दिएको पैसा खर्च गर्ने बानी परेको म, यहाँ आएर आफ्नो काम आफै गर्न थालें । स्वनिर्णय गर्ने क्षमता विकास गरिदियो । यसअर्थमा , अष्ट्रेलियाले मलाई जीवन जिउन सिकायो ।
लगनशीलता र मेहनती हुने हो भने अष्ट्रेलियाले करियर विकास र राम्रो जीवनस्तर दिलाउँछ ।
काम र पढाई दुबैको प्रेसरले थिचिन्छ । काममा जानु,कलेज जानु,कलेजको गृहकार्य सक्नु र ती सबैलाई व्यवस्थित गरेर लैजान चुनौती हुन्छ ।
नेपालमा बसेर सोचे जस्तो सजिलो छैन यहाँको जीवन तर सहनशीलता र लगनशीलता आफूमा विकास गर्न सक्यौं भने अष्ट्रेलियाले धेरै कुरा दिन सक्छ । अष्ट्रेलिया आउनुअघि दुख सँग जुध्न सक्छु ,कडा मेहनत गर्छु भनेर मानसिक रुपमा आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ।
Previousअभिनेता सौगातको अष्ट्रेलियामा भव्य स्वागतको तयारी
Nextबलिउड अभिनेता ओम पुरी रहेनन्
यसकारण विद्यार्थीहरुको लागि उपयुक्त छ अष्ट्रेलिया
३१ असार २०७४, शनिबार १०:४६
२३ श्रावण २०७४, सोमबार ०३:०४
नारी दिवसमा घरेलु हिंसा विरुद्ध नारी निकुञ्ज अष्ट्रेलियाको अन्तक्र्रिया
१४ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार ०४:३३